साइकलमा च्याउ बेच्ने बाबुराम कसरी भए कार चढ्ने ? भन्छन्, ‘यहीँ हो विदेश, यहीँ छ कमाइ’ – Etajakhabar
साइकलमा च्याउ बेच्ने बाबुराम कसरी भए कार चढ्ने ? भन्छन्, ‘यहीँ हो विदेश, यहीँ छ कमाइ’
चितवन – चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं ३ पदमपुरका बाबुराम केसीले एउटा झुप्रोबाट च्याउ खेती शुरु गर्नुभएको थियो । विसं २०५६ मा च्याउ खेती शुरु गर्नुभएका केसी अहिले छ कट्ठामा च्याउ लगाउनुहुन्छ । साइकलमा च्याउ डुलाउनुहुन्थ्यो, अहिले गाडीमा हिँड्नुहुन्छ । च्याउ बेचेरै जग्गा समेत जोड्नुभयो ।
कन्ने र गोब्रे च्याउ लगाउँदै आउनुभएका उहाँ दैनिक औसत १०० किलो च्याउ उत्पादन गर्नुहुन्छ । ‘यहीँ हो विदेश, यहीँ छ कमाइ,’ केसीले भन्नुभयो – ‘मेहनत गरे जुन पेशाबाट पनि कमाइ हुन्छ ।’ कहिलेकाहीँ दिनमा ४०० केजीसम्म उत्पादन हुन्छ ।
चितवनको पदमपुरका च्याउ उत्पादक किसान बाबुराम केसी च्याउ टिप्दै । साइकलमा च्याउ डुलाउने केसी अहिले कारमा हिँड्नुहुन्छ । तस्वीर ः नारायण ढुंगाना, रत्ननगर, चितवन
विसं २०५६ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाले जंगलमा मानवीय चाप घटाउन गाउँका स्थानीयवासीलाई आयआर्जनका लागि च्याउखेती तालीम दिएको थियो । वन्यजन्तु संरक्षण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य थियो । शुरुमा केसीसहित १० जनाले तालीम लिएका थिए ।
त्यो बेला ग्रामीण कृषक समूह गठन गरेर च्याउ खेती शुरु भएको केसी सम्झनुहुन्छ । उक्त समूहमा अहिले मासिक ३०० बचत गर्नुहुन्छ उहाँ ।
सामान्य खेती किसानी गरेर जीविका चलाउन उहाँलाई पहिले निक्कै समस्या थियो । त्यो बेलाको खेती पनि वन्यजन्तुले खाइदिन्थ्यो । अहिले आफ्नो जीवन फेरिएको छ भन्नुहुन्छ केसी ।
च्याउबाट खर्च कटाएर मासिक रु १ लाख न्यूनतम कमाई हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रतिकिलो रु १२० मा थोकमा च्याउ बेच्नुहुन्छ । बजारमा खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु २०० देखि २५० सम्म पर्छ । विगतमा भारतमा मजदुरी गरेको अनुभव केसीसँग छ । त्यसपछि नेपाल आएर जग्गा नापीमा समेत काम गर्नुभयो उहाँले ।
‘जब च्याउ खेती शुरु भयो दुःखका दिन गए,’ केसीले भन्नुभयो – अहिलेको पेशाबाट निक्कै आनन्दित छु ।’ उहाँले खेती शुरु गरेदेखि पछि फर्कनु परेको छैन ।
झुप्रोबाट खेती शुरु गर्नुभएका उहाँको अहिले च्याउका ६ वटा ठूला घर छन् । विस्तार गर्दै उहाँले अहिले ६ कट्ठामा च्याउ खेती गरिरहनुभएको छ ।
उहाँलाई पत्नी सीता केसीले सघाउनुहुन्छ । ‘उहाँले बजार हेर्नुहुन्छ, यहाँको व्यवस्थापन म स्वयं गर्छु,’ सीताले भन्नुभयो । च्याउको मौसमका बेला १२÷१५ जनासम्म कामदार राख्ने गरिन्छ । अहिले व्यावसायिक च्याउ खेतीका सफल किसानको रुपमा केसी परिवार छन् । च्याउ बेचेर गाडी, मोटरसाइकल सहित रु ५० लाखमा ३ कट्ठा जग्गा समेत जोडिसक्नुभएको छ ।
विसं २०५६ मा जब राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट तालीम लिएपछि उहाँले तीन प्याकेट च्याउको बीऊ र रु १० हजार बराबरको सामग्री पाउनुभएको थियो । झुप्रोमा च्याउ खेती गर्दा पहिलो पटक ३५ किलोग्राम उत्पादन भयो । ‘त्यो बेलाको खुशीको सीमा नै भएन,’ केसीले भन्नुभयो । विस्तारै उहाँले खेती बढाउन थाल्नुभयो । शुरुमा उहाँसँग एउटा साइकल मात्र थियो । त्यही साइकलमा उहाँले उत्पादित च्याउ बोकेर गाउँ शहर डुलाउनुहुन्थ्यो ।
बुटबल र हेटौँडासम्म साइकलमा च्याउ लगेर बेचेको अनुभव उहाँसँग छ । नारायणगढसम्म साइकलमा जाने, साइकलसहित च्याउ गाडीमा राख्ने, बुटबल पुगेपछि झार्ने अनि साइकलमा डुलाउने । केही वर्ष यसरी बिताउनुभयो उहाँले । साइकलको सहारामा च्याउ बेचेर कमाएको पैसाले उहाँले खेती विस्तार गर्नुभयो ।
‘मैले साइकलमा १० वर्ष च्याउ बेचें,’ केसी भन्नुहुन्छ – त्यो साइकल अझै माया लागेर झुण्ड्याएर राखेको छु ।’ च्याउ घरभित्रै सिलिंगमा साइकल खिया लागेको अबस्थामा अझै झुण्डिएको छ । कमाइ बढेपछि उहाँले साइकल छाडेर मोटरसाइकल किन्नुभयो । त्यसमै राखेर च्याउ बेच्नुभयो ।
अहिले उहाँ कारमा च्याउ लैजानुहुन्छ । पहिले साइकलमा गाउँगाउँ डुलाउने उहाँलाई अब त्यसरी दुःख गर्नुपर्दैन । घरमै लिन आउँछन् । नभए थोक पसलमा लगेर छाड्नुहुन्छ । सरकारी सहयोग भने अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो केसीको छ ।
अहिले केसी च्याउको बीऊसमेत उत्पादन गर्नुहुन्छ । उहाँलाई १२÷ १४ हजार प्याकेट बीऊ लाग्छ । अरु बाँकी उत्पादित बीऊ बेच्नुहुन्छ । विभिन्न स्थानबाट बीऊ लिन उहाँकहाँ आउने गरेको शुरुको सहयोगी संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका संरक्षण अधिकृत सन्तोष भट्टराई बताउनुहुन्छ । लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा भने उहाँ अलि दुःखी हुनुहुन्छ ।
शुरुमा च्याउ खेती गर्दा जति मूल्य थियो, अहिले पनि त्यही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो । तैपनि अहिले यो पेशामा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
च्याउखेती सिकेर उहाँले सीप समेत बाँड्नुभयो । अहिले एकसय जनालाई च्याउ खेत गर्ने सीप सिकाइसकेको केसी बताउनुहुन्छ । जिल्लाकै च्याउ खेतीका नमूना किसानको रुपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २८, २०७४ समय: २:५५:४६
एक महीने माधवनारायण व्रत एवं मेला भक्तपुरमा आजबाट शुरु (तस्विर सहित)
चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्काको हेर्नुहोस् नदेखिएको रूप , देखिइन यस्तो हट अवतारमा , हेर्नुहोस् आगै लगाउने १० तस्बिरहरु
बिदेशी मुद्रा साट्नु छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको बिदेशी मुद्राको बिनिमय दर
‘श्रीस्वस्थानी व्रत कथा दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत हो’ डा.जेसिका, श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा पीएचडी गर्ने अमेरिकी नागरिक
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा मुछिएका बम दिदि बहिनिको आक्रोश : हामीलाई मिडियाले अपराधी बनाए,मानवअधिकारकर्मीले बेश्या बनाए (भिडियोसहित)